တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Gouxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Gouxiang အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင်လုံ တတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပ နေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေ အနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Gouxiang အားလကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွား ရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Gouxiang အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စဈသံမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပငျလုံ တတိယ အကွိမျအစညျးအဝေးကငျြးပ နမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော ဒသေတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံအကြိုးတူပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျတို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။